Maintenance Service CRM
Maintence Services CRM
Home > Articles posted by MyanmarHims
Smart Business တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးပါသလဲ ? Smart Business နဲ့ ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖတ်ပြီးဆွေးနွေးပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ 1 . Smart Business ဖြစ်ဖို့ဘာကြောင့် အရေးကြီးပါသလဲ ? အရာရာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ IT ခေတ်ကြီးမှာဘယ်အရာမဆိုမြန်မြန် နှင့် မှန်မှန်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကအဓိကကျနေတာဆိုတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်တွေကစနစ်တကျရှိနေဖို့ရန်အရေးကြီးတာမို့ Smart ကျကျနဲ့သင့်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ပြီး “Smart Business “ တခုအဖြစ်ဖန်တီးဖို့အတွက်လိုအပ်လာပြီပေါ့။2. မိမိတို့ ရဲ့ လုပ်ငန်း ကို “Smart Business” ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစတင်ကြမလဲ ? “Smart Business “ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အရေးအကြီးဆုံးက Communication ပါ။ ဝန်ထမ်းအချင်ချင်းအချိန် နှင့် တပြေးညီ Information တွေမပျက်သိနေကြမယ် ၊ မိမိတို့ရဲ့အဖိုးတန်လှသော Customer Information များမပျောက်မပျက်ထိန်းသိမ်းနိုင်နေပြီဆိုရင် “Smart Business “ တခုစတင်ဖို့မခက်ခဲတော့ပါဘူးနော်။ […]
Cloud Computing Technology နှင့် သူ၏ အားသာချက်များ ယခုအချိန်အခါတွင် IT Technology သည် Industry Sector တိုင်းအတွက် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ တွင်ပါဝင်လာသည်ကို လူတိုင်းသတိပြုကြမည်ဟုထင်ပါသည်။ ထို IT Technology ၏ Cloud နည်းပညာသည် User များအတွက် နည်းပညာ အခက်အခဲ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကို လျော့ချပေးနိုင်ခြင်း ၊ ဝန်ထမ်း အချင်းချင်း ၊ အသင်းအဖွဲ အချင်းချင်း မည်သည့်နေရာ မည်သည့်အချိန် တွင်မဆို တူညီသော Platform အတွင်း Information ဖလှယ်ရင်း အချိတ်အဆက်မိမိ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း စသည့် အားသာချက်များရှိသကဲ့သို့ Data များခိုးယူ ဖျက်စီးမှု အစရှိသော Cybercrime များသတိပြု ကာကွယ်ရန်လည်း အရေးကြီးလိုအပ်ပါသည်။ […]
Customer Information Management Business တိုင်းမှာ Customer Information များ ထိန်းသိမ်းရန် ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလည်း ဆိုတာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးသွားချင်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက်လေးကို ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် နဲ့ စတင်ပါရစေ။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ EDO ခေတ်ကာလဟာဆိုရင် ကုန်သွယ်မှုစီးပွားရေး အရမ်းကို ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ရေကြောင်း၊ ကုန်းကြောင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ကုန်သွယ်ခဲ့ကြတဲ့အပြင် နိုင်ငံရပ်ခြားကုန်သွယ်မှုတွေပါ ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးတွေနဲ့ စည်ကားနေတဲ့ မြို့လည်ကောင်မှာ မီးလောင်မှုကြီး တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ်။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာအနီးဆုံးမှာ ကုန်သည်ကြီးတစ်ဦးရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ ဆိုင် နဲ့ ကုန်လှောင်ရုံကြီး တစ်ခု ရှိပါတယ်။ လူအများဟာ မီးကိုငြိမ်းသတ်ဖို့ ကြိုးစားကြသလို အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို မီးလွှတ်ရာကြိုးစား ရွှေ့ပြောင်းကြနဲ့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်နေကြချိန် […]
Room 101 , First Floor, Windsor Tower, No.17, Shin Saw Pu St, Sanchaung Tsp, Yangon, Myanmar.
Office – 01-538363
Sales – 09-963612380, 09-968362617
Supporting – 09-973617256
COPYRIGHT @ HIROKEI MYANMAR 2022	↑